सनातन धर्ममाथि बढ्दो प्रहार | चितवन पोष्ट
सनातन धर्ममाथि बढ्दो प्रहार
अहिले राजनीतिक बजार तताइरहेका केही विषयमध्ये एसिया प्यासिफिक सम्मेलन पनि एक हो । एउटा क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्था युनिभर्सल पिस फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारको सक्रिय संलग्नतालाई लिएर आलोचना भइरहेको छ र उसमाथि क्रिश्चियन धर्मलाई बढवा दिएको लाञ्छना पनि लागिरहेको छ । गत मंगलबार अधिवक्ता भूपेन्द्रप्रसाद पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरूद्ध प्रहरी परिसर टेकुस्थित प्रहरी कार्यालयमा पुगी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्त लामासमक्ष उनीमाथि कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । उनले निवेदनमा धर्म परिवर्तनको उद्योग कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्न माग गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीसँगै उक्त क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्थाका अध्यक्ष ढकालविरूद्ध पनि कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । शनिबार सम्पन्न उक्त सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयं ५ दिनसम्म हायात होटलमा बसी उक्त धर्म र धर्म प्रचारकहरुलाई प्रोत्साहित गरेको र नेपाली जनतालाई क्रिश्चियन बन्न प्रेरित गरेको आरोप लगाएका छन् । सँगसँगै, उनले देशैभरका पालिकाका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुलाई समेत एकै ठाउँमा राखेर आशीर्वाद दिलाएकामा पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
निवेदनमा अपराध संहिता २०७४ को दफा १५८ को १ र २ विपरीत धर्म परिवर्तन गराउन नहुने कार्यमा मतियार भई विवादित संस्था युपीएफको तक्मा वा उपहार दिने कार्य नेपालको संविधान २०७३ को धारा २७७ विपरीत रहेको जाहेरीमा दाबी गरेका छन् । यद्यपि, एसएसपी लामाले जाहेरी निवेदनमा तोक लगाएनन्, तापनि यो विषय सतहमा आएको छ र जनताको नजरमा परेको छ ।
सँगसँगै, उनले गत वर्ष हिन्दुधर्मका सन्तहरुले नेपाललाई हिन्दुसापेक्ष नेपाल तुल्याउने कार्यमा भूमिका खेल्न आग्रह गरी ज्ञापन बुझाउँदा उनले नेपाल अब पछि हट्न नसक्ने भनी दिएको जवाफलाई पनि सँगै राखेर हेरिएको छ । दुई भिन्न समयमा दुई धर्मका बीच प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको व्यवहार र विचार आफैँमा विरोधाभासपूर्ण रहेको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुने देखिन्न ।
त्यसो त, सर्सर्ती हेर्दा एउटा गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीपछिको वरियता क्रममा रहेका उपप्रधानमन्त्री स्वयं विमानस्थल पुगेरै स्वागत गर्नु, सरकारकै तर्फबाट प्रीतिभोज दिनु, प्रधानमन्त्री कार्यक्रम सम्पन्न नहुँदासम्म नै कार्यक्रम स्थलमै आवासीयरुपमै बस्नु, यशुपुत्री सम्झने मुनको अभिव्यक्ति र त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दीक्षित बनेको भन्ने कथन व्यङ्ग्यात्मक कोणबाट प्रस्तुत हुनु पनि सरकारकै आलोच्य पक्ष बनेर आएको छ ।
निष्क्रिय कांग्रेसको भविष्य
रुपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता र संलग्नता बाख्रो हराएको बेलामा बाघ कराएकाले उतैतिर शंकाको तीर सोझिएको पक्कै छ । सारमा हेर्दा उनको नियतमा खोटै लगाइहाल्ने ठाउँ आइहालेको भने देखिन्न । तर, यसो हुनुको मुख्य कारण पनि उनले हिन्दु धर्मावलम्बीसँग रूखो व्यवहार गर्ने तर क्रिश्चियनहरुसँग नरम व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति जिम्मेवार देखिन्छ ।
हिन्दुधर्म आफैँमा सर्वप्राचीन र सर्वकालिक छ । सहिष्णुता, हार्दिकता, अरुको सम्मान गर्ने र उदारतापूर्वक हेर्ने यसको सनातनी विशेषता नै हो । अतिथि देवो भव भन्दै अतिथिलाई देवता सम्झने, मातृ देवो भव भन्दै आमालाई सर्वोपरि देवी सम्झने र उनलाई साक्षात् भगवान्, गुरू र पिताभन्दा हजारौँ गुणा महिमाशाली ठान्ने भनेकै यस धर्मले हो । यसले सबैलाई बाँच्न र बचाउन प्रेरितमात्र गर्दैन, मानिसलाई आशावादी पनि बनाउँछ । जीवनवादी बनाउँछ र प्रेम र हार्दिकता नै सिकाउँछ । मीठो बोल्न र साँचो व्यवहार गर्न प्रेरित गर्छ । ध्वंस र अराजकतामाथि यसले विश्वास गर्दैन । यसर्थ, उदारता र सकारात्मक सोच यसको सुगन्ध हो । विश्वबन्धुत्वमाथि यसले अविचल विश्वास राख्तछ । उल्टो, सुल्टो जुनकुनै किसिमले गरिए पनि श्रद्धाले गरिए त्यसलाई हार्र्दिकतापूर्वक ग्रहण गर्दछ । यसैले, वर्तमानमा पश्चिमाहरु स्वयं योग, ध्यान र यसले व्यवस्था गरेको समाज र परिवार व्यवस्थातिर आकर्षित भइरहेका छन् ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा धर्मनिरपेक्षताको माग उठेको थिएन । कुनै सशस्त्र जनक्रान्ति हुँदा पनि धर्मको विषयले प्रवेशै पाएको थिएन । या, कुनै त्यस्तो आन्दोलन पनि भएकै थिएन, न यस विषयमा कुनै जनमतसंग्रह नै गरिएको थियो । हिन्दुधर्म र धर्मावलम्बीहरु कसैले पनि अन्य धर्म र धर्मावलम्बीहरुलाई हेपेको, हेय दृष्टिले हेरेको, बहुमतका आधारमा पेलेको र धर्मान्तरण गर्न खोजेको भनेर कसैले कतै त्यस्तो कुनै असन्तुष्टिविना नै अप्रत्याशितरुपमै बदल्ने काम गरियो । तर, यो परिवर्तन नियोजित थियो, झुक्यानमै भयो । नेताहरुमाथि अतिशय विश्वास र सम्मान गर्ने नेपालीहरुको भावनामाथि चोट पु¥याएरै यस्तो बदनियतपूर्वक नै गरियो । यो नेताहरुमाथि जनताले गरेको अन्धविश्वास र अन्धभक्तिकै परिणति थियो । उनीहरुलाई भाग्यविधाता र मसिहा सम्झने प्रवृत्तिकै कारण भयो । उनीहरु युरोपेली, अमेरिकी आदि इत्यादिको विभिन्न प्रकृतिको मोहमा परे । सम्भवतः त्यसबेला भारत पनि रणभुल्लमै प¥यो या त तत्कालीन भारतीय कांग्रेस सरकार पनि धर्मनिरपेक्षताकै हिमायती रहेकाले पनि यसमा उसको मौनता रह्यो र यस्तो नहुनुपर्ने कार्य भयो ।
नेताहरुले राजतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अन्त्य गरेसँगै परम्परागतरुपमा रहेको र मुलुकको एउटा पहिचानका रुपमा रहेको हिन्दुधर्म सापेक्षता अन्त्य गर्दा पनि जनताले त्यसको कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्, बरू एक प्रकारले मौनतापूर्वक स्वीकार गरे । झन्डै ओंकार परिवारलाई समेत जोडेर हेर्दा नब्बे प्रतिशत हिन्दु धर्मावलम्बीहरुकै बाहुल्य रहँदारहँदै पनि हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले ठिकै छ नि त, अरुले पनि समान मानसम्मान र आदर हुँदा राम्रै त हुन्छ नि भनेर हेरे, सम्झे र बुझे ।
यहाँसम्म कि भारतले धर्मसापेक्ष नै तुल्याउनुपर्ने विषयलाई मूल मुद्दा बनाएर तत्काल संविधान जारी नगर्न र हिन्दुधर्म सापेक्ष तुल्याएर मात्र संविधान जारी गर्न चर्को दबाब दियो । संविधान जारी भएपछि पनि अनेकाँै बहाना र प्रपञ्च गरेर उसले नाकाबन्दी नै लगायो । उसले नेपाललाई हिन्दुसापेक्ष राज्य तुल्याउने विषयमा खतरा र आलोचना सहेरै यो कदम उठाएको थियो । यति चर्को दबाब दिइरहँदा पनि यहाँका हिन्दुवादी संघसंस्था र हिन्दुधर्मलाई नै जीवनको पर्याय ठान्नेहरु पनि यसमा सहभागी भएनन्, तटस्थ बसे । धर्मका नाउँमा दङ्गाफसाद गर्ने मनस्थितिमा देखिएनन् । उनीहरुले एकप्रकारले सबै धर्मलाई समान मह¤व दिइएको विषय ठिकै रहेको भावलाई निर्वाह गरिनै रहे । फलतः भारत यस विषयबाट पछि हट्न बाध्य भयो ।
तर, यति सहयोग, सद्भाव र सहिष्णुभाव राखिरहँदा पनि अनेकौँ बहाना बनाएर हिन्दुहरुलाई धर्मान्तरण गर्ने कार्य बन्द गरिएन । सहनशीलता, उदारता, सहिष्णुताको पराकाष्ठासम्म सहिरहँदा अम्लो दिँदा डुडुल्नै निल्न खोज्ने प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन उत्कर्षमा पुग्यो । अब मौन रहे भोलि हिन्दुत्वकै मूलभूमिमा हिन्दु नै नरहने सम्भावना शतप्रतिशत बन्न थाल्यो । यही स्थिति रहे भोलिको सन्ततिलाई हामीले के हस्तान्तरण गर्ने ? अर्काको संस्कार र संस्कृति ? जसमा पुस्ताँैपुस्ताले अपनत्व ग्रहण गर्न सक्ने छाडापनबाहेक कुनै त्यस्तो मूल्य नै देखिन्न । वैवाहिक र पारिवारिक संस्कृति विखण्डित छ । बन्धुत्व र छिमेकी संस्कार शून्य छ । गुरूकुलीय आचार र संस्कार खण्डित छ । आशावादी र भ्रातृत्व र सामूहिक चेत कमजोर छ । यसैलाई वरण गरेर यही तिम्रो पितापुर्खाले मान्दै आएको सभ्यता भनेर पुस्तान्तरण गर्ने ? भगवान् शिव यही हिमवत खण्डका हाम्रा जातीय इष्टदेव जो नेपाली माटोमै उत्पत्ति भए र विश्वकल्याणार्थ कार्य गरे र गर्दै रहेका छन् ।
पार्वती नेपालकै पर्वत क्षेत्रमा राज्य गर्ने पर्वत राजाकी पुत्री थिइन् र शिव यहीँका किराँत थिए । यो तथ्य किरार्जुनीयम, महाभारतादि ग्रन्थमा उल्लेखित छ । सीता नेपालकै पुत्री । भगवान् बुद्ध नेपालमै जन्मिएका हाम्रा आराध्य देव । हामीले देवता माने पनि महामानव माने पनि आखिर यी सबै हुन् नेपालमै अवतरित देवदेवीहरु । सुनसरीमा पैदा भएका वराह हाम्रै भूमिमा पैदा भएका विष्णु देव हुन् । रामायणका रचयिता हाम्रै नेपाली पूर्वज थिए, जुन ग्रन्थ नवलपरासीको यही पवित्र त्रिवेणीधाममा गरियो । महाभारतादि ग्रन्थका निर्माता व्यासले यहीँ रहेर तपस्या गरे र यहीँका गणेशले उनलाई महाभारत लेखनमा सघाए । के यो तथ्यका निम्ति सर्वप्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद, उपनिषद, पुराण र इतिहास साक्ष्य छैनन् र ?
यस्तो हाम्रो आफ्नै मातृभूमिबाट आरम्भ भएको हाम्रो आफ्नै सभ्यतालाई तुच्छ र हेय सम्झेर पराया सभ्यतालाई अवलम्बन गर्ने सोच कतिको ग्राह्य छ ? यसमा बहस, छलफल र पुनर्विचार गर्नु जरूरी छैन र ? आफ्ना सुलक्षणयुक्त छोराछोरीलाई परित्याग गरी तिनलाई बेसहारा छोडेर अर्काका छोराछोरीलाई धर्मपुत्रपुत्रीका रुपमा ग्रहण गर्नु कत्तिको उचित छ त ? त्यसैलाई प्रोत्साहित गर्ने हाम्रो नीतिलाई के भन्ने ? विवेकको ढोका खोलेर अन्तरमनको आवाज सुन्नु आवश्यक छैन र ?
अरुले द्रव्य चढाए, पुरस्कार र तक्मा भिराउने भए, स्वास्थ्योपचार गरिदिने, सित्तैमा ल्यापटप, गाडी, डलर र कलर पनि फेरिदिने भए भन्दैमा त्यसैका पछि मोहित हुनुलाई कस्तो स्वाभिमान भन्ने, कस्तो धर्म र कर्म ठान्ने ? यसर्थ, धर्मजस्तो संवेदनशील विषयमा व्यक्तिले त संवेदनशील बन्नैपर्ने स्थितिमा सरकार नै संवेदनाहीन बन्दा भोलिको परिस्थिति कति प्रतिकूल बन्ला ? सहनुको पनि एउटा हद हुन्छ, त्यो पार भएपछि पैदा हुने त द्वन्द्व नै हो । द्रव्यकै पछि दौडिएर धर्मसापेक्षतालाई सहजै बदलिदिएर धर्मनिरपेक्ष बनाइदिने नेतृत्वको दम्भपूर्ण चरित्र साँच्चै नै विडम्बनापूर्ण छ । त्यही हिजो कांग्रेससहितको सात दलले रोपेको धर्मनिरपेक्षतारुपी वृक्षले दिँदै गरेको दुष्परिणति हो पुरस्कार, र त्यसमा आज प्रम ओली मोहित भए । भोलि प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, र डा. बाबुराम भट्टराईहरु पनि लोभिँदै त्यसैको पछिपछि विनका अघि सर्प लठ्ठिएझैँ लठ्ठिने छन् र यसैको साउँब्याजस्वरुप निर्बाध धर्मान्तरण गरिँदै जानेछ, गौहत्या गरिने छ, संस्कृत, संस्कार र संस्कृतिको क्षयीकरण हुनेछ र देशभरि चर्च र क्रिश्चियानीकरणबाट मुलुक व्याप्त बन्नेछ ।
यसर्थ, यस्ता त¤वहरुबाट यस देशको सनातनी धर्मलाई जोगाउने दायित्व हामी नागरिकमै आएको छ । अब यो वा त्यो दलबाट हैन, स्वतःस्फूर्तरुपमै जनता अग्रसर हुनुपर्ने घडी आएको छ । राप्रपा आदि दलहरुले त यसलाई सत्ता उक्लने भ¥याङ बनाइसकेको परिस्थिति छ । हो, अब पनि हिन्दुहरुले कसैलाई तिरस्कार गर्नुहुन्न र असहिष्णु पनि बन्नुहुन्न । तर, यो उदारतालाई कमजोरी सम्झनेमाथि अब धाबा बोल्नबाट पनि चुक्नुहुन्न । अब साँच्चै नै बोल्ने र लेख्ने बेला आएको छ । जिजुबाजेले हामीमा सुम्पेको यो धरोहरलाई जोगाएर भोलिको पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न अब यसका हिमायती सारा नागरिक अग्रसर हुनुको विकल्प छैन ।